Zlatan Ibrahimovic oo ku soo hadlay baraha bulshada kaddib dhaawicii la sheegay inuu soo afjarayo waayihiisa ciyaareed – Gool FM
Zlatan Ibrahimovic oo ku soo hadlay baraha bulshada kaddib dhaawicii la sheegay inuu soo afjarayo waayihiisa ciyaareed
(Manchester) 02 Maajo 2017. Joog dheere Zlatan Ibrahimovic ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran oo la sheegay inuu soo afjarayo waayihiisa ciyaareed.
Laakin xiddiga reer Sweden ayaa iminka la warinayaa inuu maray qaliin lagu guuleystay wuxuuna sheegay in la xaliyay dhaawiciisa isla markaana uu bartilmaameedsanayo inuu dib ugu soo laabto garoomada.
Zlatan oo ku soo hadlay bartiisa Instagram ayaa soo dhigay sawir muujinaya inuu qaliin soo maray isagoona soo raaciyay qoraal ah in la xaliyay dhibka isla markaana uu soo laaban doono isagoo ka xoogan sidii hore.
Kol sii horeysay ayuu Ibra sidoo kale Istagram-kiisa soo dhigay qoraalkan:
“Ugu horreyn, Waad ku mahadsan tihiin dhammaan taageerayada iyo jaceylka. Ma jiraan wax cusub waan dhaawacmay sidaa darteed waqti baan ka maqnaan doonaa kubbada cagta. Waxaan mari doonaa midaan sida wax kasa oo kale waana soo laaban doonaa anigoo xitaa ka xoogan sidii hore. Ilaa waqtigan waxaan ku ciyaaray hal lug, sidaa darteed wax dhib ah ma naqon doonto.
“Hal sheey ayaa hubaal ah. Waan go’aansanayaa marka ay noqoto inaan joojiyo ciyaaraha wax kalena ma jiraan. Inaan is dhiibo ma ahan dooq. Mar dhow maan idin arki doonaa.”.
SAWIRRO: Kooxda Juventus oo gaartey magaalada Monte Carlo